बुलेटप्रुफ गाडी अब गृहमन्त्रीलाई पनि नेपाललाई कतारले दिएका नौवटा बुलेट प्रुफ मर्सिडिज बेन्ज गाडीमध्ये एउटा गृहमन्त्रीले प्रयोग गर्ने भएका छन्। उपहारस्वरूप दिएको ती गाडीमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्रीले प्रयोग गर्ने गरी पठाइदिएपछि अबदेखि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रयोग गर्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। खबर हामी...
हराएका मोबाइल किन भेटिँदैनन् ?
काठमाडौं – भवन अभावमा महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले अस्थायी टेन्टमार्फत सेवा दिइरहेको छ । परिसरभित्रको एउटा टेन्टको नाम हो–मोबाइल शाखा ।
सेवाग्राहीलाई घुम्दै सेवा दिने भएका कारण यसको नाम मोबाइल शाखा राखिएको भने होइन । यो त हराएका र चोरी भएका मोबाइल खोज्नका लागि परिसरले जुराएको शाख...
बैशाख ३१ गते स्थानिय निकायकाे निर्वाचन हुने
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३१ गते गर्ने निर्णय गरेको छ'। सोमबार तेस्रो पटक बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।
०४६ सालको परिवर्तन यता नेपालमा दुई वटा मात्र स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सके।...
आज निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री (भिडियोसहित)
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गर्न लागेको बताएका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन नेपाल (प्याब्सन)को सोमबारदेखि सुरु भएको १३ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै पनि बिख...
राजमार्ग नै सुनकोसी नदीमा खसेपछि ....
सिन्धुली – विपी राजमार्ग सडकखण्डअन्तर्गत सिन्धुलीको शीतलपाटीमा पर्ने राजमार्ग सुनकोसी नदीमा खसेको छ । शीतलपाटी–९ वेनीघाट खाल्टेमा पर्ने विपी राजमार्गको झन्डै एक सय मिटर सडक गएराति सुनकोसी नदीमा खसेको हो ।
राति ११ बजे सडक सुनकोसीतर्फ खसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ताराबहादुर कार...
१८ घन्टासम्म खट्छन विमानस्थलमा सिकारी
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चरा धपाउन सिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । जहाजमा चरा ठोक्किने समस्या भएपछि धपाउन सिकारी राखिएको हो । सिकारी १८ घन्टासम्म चरा धपाउने ड्युटीमा हुन्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता पि एन ठाकुरले चरा धपाउन पाँचजना सिकारी रहेको जानकारी दिए । उनका...
२६ चैतमा गोलाप्रथा गरि भूकम्पपीडितहरूलाई ट्याक्सी दिइने भूकम्पपीडितहरूलाई दिन लागिएको ट्याक्सीको नतिजा आगामी २६ चैतमा सार्वजनिक हुने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले गोलाप्रथाबाट नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
‘२६ चैतमा गोलाप्रथा गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ,’ विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले भने, ‘०७३ सालभित्रै यसको टुंगो...
३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण : नया रहस्य खुल्यो सामान्यतः दुई–दुई वर्षमा कर्मचारीको सरुवा हुन्छ। तर, तथ्यांक अधिकृत श्रीनारायण यादवलाई भने निजामती प्रशासनको यो नियम लागू भएन। १४ वर्षदेखि निरन्तर उनी भन्सार कार्यालय विमानस्थलमा थिए।
यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गत महिना यादवलाई सुन...
आज फागुन ७ देशभर प्रजातन्त्र दिवस मनाइदै काठमाडौं। आज फागुन ७ अर्थात् प्रजातन्त्र दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी देशभर प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदैछ ।
२००७ सालमा फागुन ७ कै दिन एक सय चार वर्ष लामो जहाँनियाँ राणाशासनको अन्त्य भई मुलुकमा प्रजातन्त्र वहालीको घोषणा भएको थियो ।
प्रजातन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्...
युवतीकोपछी लागि होटेलमा पुग्दा .....
न्युरोडका व्यवसायी श्यामसुन्दर अग्रवाल बिहीबार अपहरणमा परेका छन्। सुन्धारास्थित एक होटेलमा बन्धक बनाई करिब नौ लाख रुपैयाँ फिरौती लिएर उनलाई कोठामै थुनेर अपहरणकारी भागेका छन्।
युवतीमार्फत होटेलमा बोलाएर उनलाई अपहरण गरी बन्धक बनाइएको हो। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ। व्यापारी अग्...
राष्ट्रपति र संसदलाई धम्की दिनेलाई ७ बर्ष कैद
काठमाडौं – जनप्रतिनिधि निकाय सांसदलाई काम गर्न बाध्य पार्ने, बल प्रयोग गरेर वा नगरेर धम्की दिनेलाई सात वर्ष कैद सजाय हुने भएको छ। संसदको विधायन समितिले शुक्रबार पारित गरेको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेको फौजदारी कसुर संहितामा संसदलाई धम्की दिनेलाई कैद सजायको व्यवस्था गरिएको खबर आजको&nbs...
मेनुकालाई काठको पन्युले हिर्काएपछी ....
काठमाडौं – प्रहरीले भैंसेपाटीस्थित आशा गृहका सञ्चालक गोपाल मुखियालाई पक्राउ गरेके छ । मुखियाकी पत्नी एलिजामिटले सोही गृहमै बस्ने १० बर्षीय मेनुका लामालाई गल्ती गरेको भन्दै काठको पन्युले हिर्काएकी थिइन् । यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।
लामा बिहीबार नै बालगृहमा भेटिएकी थिइन् । उनी शुरक...
धादिङ केन्द्रविन्दु भएर गयो परकम्पन आज बिहान ६ बजे धादिङ बेनीघाट केन्द्रविन्दु भएको ४.0 रिक्टर स्केलको परकम्प गएको छ । गत वर्ष वैशाख १२ गतेको ‘गोरखा भूकम्प’पछि ४ वा त्यसमाथिका रिक्टर स्केलका हालसम्म चार सय ७७ परकम्प गएको खानी तथा भूगर्भ विभाग, राष्ट्रिय भूकम्पमापन केन्द्रका प्रमुख लोकविजय अधिकारीले जा...
नेकपा (माओवादी)को विहीबार (आज)देखि स्थानीय थवाङमा सुरु भएको पार्टीको आठौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत् गरेका छन् ।
१८ फागुनमा स्ववियु चुनाव हुने काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १४ फागुनमा गर्ने भनेको स्ववियु चुनाव चार दिन सरेको छ । त्रिवि पदाधिकारी र विद्यार्थी संगठनबीचको छलफलपछि चुनाव १८ फागुनका लागि सारिएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
मिति सरेपछि विप्लव माओवादीनिकट अखिल क्रान्तिकारी पनि चुनावमा सहभागी हुने...
« 12345678...203204 »